ကွန်ဂရက် ကျူလေးရှင်းပါ… လူပျိုကြီး သစ်ပုပ်ပင်… – News & Media
လွန်ခဲ့သော ၁၁ နှစ်၏ မေလဆန်းပိုင်းတွင် ‘နာဂစ်’ ဟူသော ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းကြီးတစ်ခု မြန်မာနိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းမှ သိန်းပေါင်းများစွာသော ပြည်သူတို့၏ဘဝကိုဖျက်ဆီးရန် ဝင်ရောက်ခဲ့သည်ကို မှတ်မိကြဦးမည် ထင်ပါသည်။
ထို ‘နာဂစ်’ မုန်တိုင်းကြီးက ဧရာဝတီတိုင်းကို ဖြတ်ကျော်ကာ ရန်ကုန်သို့ အလုံးအရင်းဝင်ခဲ့ပြီး နောက်ရက်တွင် ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားအပါအဝင် လူအများစု ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲက သစ်ပင်တစ်ပင်ရှိရာသို့ စိုးရိမ်ပူပန်သော မျက်လုံးများကိုယ်စီဖြင့် အပြေးအလွှား လာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့ လူအများ၏ ချစ်ခင်ပူပန်မှုခံရသော ထိုသစ်ပင်သည် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပရိဝုဏ်ထဲတွင် တစ်ပင်တည်းရှိပြီး အဖိုးမဖြတ်နိုင်စရာ တန်ဖိုးအနဂ္ဂများစွာ ရှိနေသည့် အပင်။ ထိုသစ်ပင်ကား သစ်ပုပ်ပင်။
ထိုစဉ်က ရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိ သက်တမ်းရင့်သစ်ပင်ကြီးများအားလုံးနီးပါး ‘နာဂစ်’ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း၏ လေပြင်းဒဏ်ကြောင့် အတုံးအရုံးလဲပြိုခဲ့ သော်လည်း သစ်ပုပ်ပင်သည် မြေပေါ်တွင်မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်နေနိုင်ခဲ့သည်။ တကယ်တော့ ထိုအချိန်က သစ်ပုပ်ပင်ကြီး တစ်နှစ်ပတ်လုံးခြုံလာခဲ့သည့် မြကမ္ဗလာ ဝတ်ရုံဟောင်းကိုခွာပြီး သစ်ကိုင်းများ သစ်ရွက်မဲ့ (လုံးတီးဖြစ်)နေသော အချိန်ပင်။
ထို့ကြောင့်ပင် လေဒဏ်ကိုအံတုပြီး မပြိုလဲခြင်းဖြစ်သည်ဟု အချို့က ဆိုကြသည်။ ရန်ကုန်မြို့ကြီးကို စောင့်ရှောက်နေသည့် ရန်ကုန်ဘိုးဘိုးကြီး သစ်ပုပ်ပင်တွင် စိုးစံနေသောကြောင့် ဘေးဒဏ်မသင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟူ၍လည်း ယုံကြည်သူက ယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။ အချို့ကလည်း သစ်ပင်အောက်ခြေအမြစ်နှင့် ပင်စည်ခေါင်းပေါက်ကြားထဲ အင်္ဂတေသွန်းလောင်းပြီး ကျားကန်ထားသောကြောင့် မယိုင်လဲခြင်းဖြစ်သည်ဟု ထင်မြင်ချက်ပေးကြသည်။
မည်သူက မည်သို့ပင်ဆိုဆို သစ်ပုပ်ပင်ကြီး လဲပြိုမသွားသည့်အတွက် ကြောင့် စိုးရိမ်ပူပန်သူအားလုံး စိတ်သက်သာရာရခဲ့ကြသည်။ ‘လောကဓံ မုန်တိုင်းကြားတွင် ကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်ခြင်း’ ဟူသော လောကနိယာမ သင်ခန်းစာတစ်ခုကို ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်က ဆရာများနည်းတူ သစ်ပုပ်ပင်ကြီးက လူသားများအား သင်ပြခဲ့ခြင်းပင်။
ထိုအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပြီး ၁၁ နှစ်ကျော်အကြာ ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာ ၆ ရက် နံနက်ခင်းပိုင်းတွင် သစ်ပုပ်ပင်ခြေရင်း၌ လူအများ တစ်ဖန် စုဝေးနေကြပြန်သည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ ရန်ကုန်မြို့ပြအမွေအနှစ် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့နှင့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တို့ ပူးပေါင်းပြီး ‘ရန်ကုန်မြို့ပြ အမွေအနှစ်’ အထိမ်းအမှတ် အပြာရောင်ကမ္ပည်းပြားကို သစ်ပုပ်ပင်ကြီးတွင် တပ်ဆင်ခြင်းကို လာရောက်ဂုဏ်ပြုနေကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်မြို့ပြ အမွေအနှစ်အထိမ်းအမှတ် အပြာရောင်ကမ္ပည်းပြားကို သက်တမ်းရာကျော်ရှိ အဆောက်အအုံများ၊ နေရာများတွင် ကပ်ပေးခဲ့ ပြီးနောက် သစ်ပုပ်ပင်သည် ပထမဦးဆုံး အပြာရောင်ကမ္ပည်းပြား တပ်ဆင်ဂုဏ်ပြုခြင်းကိုခံရသည့် ‘သက်ရှိသစ်ပင်’ ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ အထင်ကရများ ဖြစ်သော ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမ၊ ဂျပ်ဆင်၊ အင်းလျားကန်၊ ကံ့ကော်တောနှင့် သက်တမ်းရာကျော် အဆောက်အအုံတို့ကိုကျော်ပြီး အမွေအနှစ်အထိမ်းအမှတ်ကမ္ပည်းပြား တပ်ဆင်ဂုဏ်ပြုခြင်းခံရသည်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သစ်ပုပ်ပင်၏ ဂုဏ်အရှိန်အဝါကို မှန်းဆနိုင်သည်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ သစ်ပုပ်ပင်ကြီးသည် ရုက္ခဗေပညာရှင်များ၏အဆိုအရ ‘အဖို’ပင် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သံယောဇဉ်ရှိသူများက သစ်ပုပ်ပင်ကြီးအား ‘လူပျိုကြီး’ ဟူ၍ ချစ်စနိုးခေါ်တတ်ကြသည်။
အဆိုပါ လူပျိုကြီးသစ်ပုပ်ပင်၏ သက်တမ်းကို အတိအကျပြောဆိုခန့်မှန်းရန် ခက်ခဲသော်လည်း ၁၉၂၀ တွင် အစပြုခဲ့သည့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထက် သက်တမ်းပိုရင့်သည်ဆိုသည်ကတော့ မည်သူမျှ မငြင်းနိုင်သော အမှန်တရားတစ်ခု ဖြစ်သည်။
သစ်ပုပ်ပင်ကို ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ဖွားဖက်တော်ဟူ၍ တင်စား ပြောဆိုလေ့ရှိကြသည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နယ်မြေဖြစ်လာမည့် လူသူတိုးမပေါက်သည့် ‘နာနတ်တောကြီး’ ကို ကာလပေါက်ဈေး ငွေကျပ်ရှစ်သိန်းဖြင့် တည်ဆောက်သူတို့ ဝယ်ယူခဲ့စဉ်က ပေတစ်ရာကျော်မြင့်သည့် သစ်ပုပ်ပင်ကြီးသည် ထိုဧက ၄၅၀ ကျော်သစ်တောကြီးထဲတွင် ထီးထီးရှိနှင့်ပြီးသားဖြစ်ခဲ့သည်။ တက္ကသိုလ်တည်ဆောက်ရန် မြေနေရာ ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းသည့်အခါ သစ်ပုပ်ပင်ကို တွေ့ခဲ့ကြပြီး ကျောင်း၏အဆင်တန်ဆာတစ်ခုအဖြစ် ထည့်သွင်းသတ်မှတ်စေခဲ့ကြောင်းကို ၁၉၂၀-၃၀ ပတ်ဝန်းကျင်၌ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် ပါမောက္ခအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် D. G. E. Hall က သူ၏စာတမ်းတစ်ခုတွင် ထည့်သွင်းရေးသားခဲ့သည်။
သစ်ပုပ်ပင်သည် သက်တမ်းရင့် ရွကြွေ်ကပင်ကြီးတစ်ပင်ဖြစ်ပြီး သူ၏ရုက္ခဗေဒအမည်မှာ Tetramelesnudiflora. R. Br (Datiscaceae) ဖြစ်သည်။ ရှေးဟောင်းဂရိဘာသာစကားအရ Tetra ဆိုသည်မှာ ‘လေးခု’ ဟုအဓိပ္ပာယ်ရပြီး ‘melos က အစိတ်အပိုင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။ ထို့ကြောင့် “Tetrameles” ဆိုသည်မှာ အစိတ်အပိုင်းအင်္ဂါလေးခုကို ဆိုလိုသည်။ ထိုအမည်အတိုင်း သစ်ပုပ်ပင်၏ပွင့်ဖတ်များကို ကြည့်လျှင် ပွင့်ရွက်လေးခုနှင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်ပြီး အဖိုပွင့်ဖတ်များက သေးသွယ်ကာ အမပွင့်ဖတ်များက ရှည်မျောမျောပုံစံမျိုး ဖြစ်သည်။
သစ်ပုပ်ပင်ကို ရန်ကုန်မြို့ပြအမွေအနှစ် ကမ္ပည်းပြား တပ်ဆင်သည့်အခမ်းအနားတွင် တွေ့ရသည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်။ ဓာတ်ပုံ-ရှင်မိုးမြင့်/မြန်မာတိုင်း(မ်)
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ သစ်ပုတ်ပြင်ကီးမှာ လက်ရှိပေပေါင်း ၂၀ဝ ကျော်မြင့်ပြီး အခေါင်းပွအပင်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ သူ၏ပင်စည်ကြီးက ယောကျာ်းငါးဦးဖက် မကရှိပြီး လူဝင်နေလို့ရသည်အထိကြီးမားသော အခေါင်းပေါက်များ ရှိသည်။ ပင်စည်က အောက်ခြေမှအထက်သို့ ရှူးတက်သွားပြီး ပင်စည်လမ်းဆုံးရာ ခွဆုံ၌ သစ်ကိုင်းများက မြွေလိမ်မြွေကောက်ဖြင့် အရပ်ရှစ်မျက်နှာသို့ ခွဲထွက်သွားသည်။ အချို့သစ်ကိုင်းများမှာ အရှေ့ဘက်သို့ ခွဲထွက်သွားမလိုလိုနှင့် လားရာပြောင်း၍ အခြားသစ်ကိုင်းများနှင့် ပူးကပ်ပြီး ဝိုင်းစက်စက်သစ်ကွင်းများ ဖြစ်သွား ကြသည်။
သစ်ပုပ်ပင်ကြီးသည် မိုးနှင့် ဆောင်းတွင်း၌ ဣန္ဒနီမြရောင် စိမ်းမှောင်သည့် အသွင်ဖြင့် သူ့အရိပ်အောက်ခိုဝင်သူတိုင်းအား အေးမြလန်းဆန်းမှုကို ပေးစွမ်းလေ့ရှိသည်။ နွေရာသီတွင်တော့ မြစိမ်းရောင်သစ်ရွက်များအဖြစ်မှ သိင်္ဂီရွှေရောင်သို့ တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲကာ ခြောက်ကပ်ကြွေကုန်ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့ တစ်ပင်လုံး အရွကြွေ်ကပြီး သစ်ရွက်မဲ့သွားသောအခါတွင်လည်း လူပျိုကြီး သစ်ပုပ်ပင် က သူ၏ကွေ့ကောက်ထိုးထောင်နေသော ရိုးတံရှည်ကြီးများဖြင့် လူတကာကို လွမ်းဆွေးအောင် ပြုစားတတ်လေသည်။ အကယ်၍ သစ်ပုပ်ပင်အိုကြီး၏ ရိုးတံကြီးများထက်၌ ဥသြငှက်တစ်ကောင် တွန်ကျူးနေသည်ကို ခံစားမှုနက်ရှိုင်းသော ကဗျာဆရာတစ်ယောက်သာ မြင်လိုက်ပါက ထိုမြင်ကွင်းသည် အဆွေးကဗျာတစ်ပုဒ် အဖြစ်သို့ တစ်မုဟုတ်ချင်း ပြောင်းလဲသွားလေ့ရှိသည်။
သစ်ပုပ်ပင်သည် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ အချစ်ဇာတ်လမ်းများကိုလည်း သိထားသူဖြစ်သည်။ တက္ကသိုလ်တွင် လာရောက်ပညာဆည်းပူးရင်း စုံမက် သွားကြသည့် ချစ်သူစုံတွဲအားလုံးလိုလိုသစ်ပုပ်ပင်၏ရင်ခွင်ထဲသို့ ခိုဝင်ခဲ့ ကြသည်။ သစ်ပုပ်ပင်၏အမြစ်ထုံးကြီးများပေါ်တွင် အတူယှဉ်ထိုင်ရင်း ချစ်ရေးချစ်ရာစကားတွေ ပြောခဲ့ကြသည်။ သစ်ပုပ်ပင်ကြီးကို သက်သေ ထူပြီး ခိုင်မာသောအချစ်သစ္စာစကားများ ဆိုခဲ့ကြသည်။ ထို့အတူ သစ်ပုပ်ပင်ကြီး အောက်တွင် ကျောခိုင်းရင်း အသဲများလည်း ကွဲကြေ ခဲ့ကြသည်။
ထိုအချစ်ဇာတ်လမ်းများကို လူပျိုကြီးသစ်ပုပ်ပင်သည် တစ်စိမ့်စိမ့် ကြည့်ရင်း ကြည်နူးခဲ့ဖူးသလို အသဲကွဲပူဆွေးပြီး သူ့အရိပ်အောက်သို့ လာရောက်ခိုလှုံသူများကိုလည်း သူ့အကိုင်းအခက်အရွက်များဖြင့် အေးမြအောင် စွမ်းဆောင်ခဲ့ ပေလိမ့်မည်။ သို့မဟုတ် မသိချင်ယောင်ဆောင်ကာ အဝေးသို့ မျှော်ငေးနေခဲ့ ပေလိမ့်မည်။
သစ်ပုပ်ပင်အိုသည် မြောက်မြားစွာသော အချစ်ဇာတ်လမ်းများကိုလည်း ဖန်တီးပေးခဲ့သည်။ သစ်ပုပ်ပင်ကိုချစ်သော အနုပညာရှင်အသီးသီးက သူတို့၏ရင်ထဲတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော ခံစားချက်အမျိုးမျိုးကိုလိုက်၍ ပန်းချီ၊ ကဗျာ၊ သီချင်း၊ ဝတ္ထုများတွင် သစ်ပုပ်ပင်ကို အမျိုးမျိုးပုံဖော်ရေးသားခဲ့ကြသည်။
သစ်ပုပ်ပင် သည် အချို့ဇာတ်လမ်းများတွင် ဇာတ်လိုက်၊ အချို့သော ဇာတ်လမ်းများတွင် ဇာတ်ပို့။
သုမောင်၏ ‘သစ်ပုပ်ပင်စောင့်နတ်’ တွင် ကိုဥသြသည် မကြင်လိုက်ရ ရှာသော သူ့ချစ်သူ ‘လစ်’ ကို သစ်ပုပ်ပင်ခြေရင်း၌ မယ်ဒလင်တစ်လက် အဖော်ပြုပြီး အလွမ်းသီချင်းများကို သီကျူးခဲ့သည်။ မင်းလူ၏ ‘ချစ်မြားရှင်’မှ စက်ပြင်သမားလေး ကိုချစ်အေးသည် သူချစ်သော တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ လေး မအေးအေးမူ၏ ပစ်ပစ်ခါခါပြောစကားကြားပြီး သစ်ပုပ်ပင်အောက်တွင် လွမ်းဆွေးခဲ့သည်။ သို့ကလို သစ်ပုပ်ပင်သည် ကိုဥသြတို့လို အသဲကွဲသူများ၏အဖော်ပြုရာ ဆွေးဖော်ဆွေးဖက် ရောင်းရင်းကြီးလည်းဖြစ်ခဲ့သည်။
လူပျိုကြီး သစ်ပုပ်ပင်က များစွာသောအချစ်ဇာတ်လမ်းများတွင် အရေးကြီးသောနေရာမှ ပါဝင်ခဲ့သော်လည်း သူကိုယ်၌က ချစ်သူမရှိသေး။ ထို့ကြောင့်ပင် သစ်ပုပ်ပင်ကိုချစ်သော ကဗျာဆရာမောင်ပန်းမွှေးက “သစ်ပုပ်ပင်ကြီး၊ အသက်ကြီးပြီ၊ ခုထိရည်းစားမရှိသေး” ဟူ၍ သုံးကြောင်းစပ်ကဗျာလေးဖြင့် ကျီစယ်ခဲ့ဟန်တူသည်။ ထိုကဗျာလေးကပင် တစ်ပင်တည်း ထီးထီးကျန်ရစ်ခဲ့သောသစ်ပုပ်ပင်ကြီးအတွက် အကောင်းဆုံးပြယုဂ် ဖြစ်တော့သည်။
အချစ်သမားများချည်းပင်မဟုတ်၊ နိုင်ငံကိုအကျိုးပြုရန် အစဉ်အကြံထုတ်နေလေ့ရှိသော ကိုအောင်ဆန်း၊ ကိုနု၊ ကိုရာဇတ်၊ ကိုသန့်တို့လို ကျောင်းသား ကောင်းများသည်လည်း သစ်ပုပ်ပင်အောက်တွင် ဝင်ရောက်ခိုလှုံခဲ့ကြသည်။ တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်သို့လာရင်း နံဘေးရှိ သစ်ပုပ်ပင်ကြီးအောက်တွင် မိမိတို့လှုပ်ရှားနေသည့် စာပေ၊ နိုင်ငံရေးကိစ္စများကို ဆွေးနွေးရာ နေရာလေးတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သည်။
ထိုသူတို့ကဲ့သို့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် ပညာရည်နို့သောက်စို့ပြီး တိုင်းပြည်ကိုအကျိုးပြုသူများ ပေါ်ထွက်လာသောအခါ သစ်ပုပ်ပင်သည် ဝမ်းသာကြည်နူး၍ ကျေနပ်ခဲ့ပေလိမ့်မည်။ နိုင်ငံကိုဆုတ်ယုတ်အောင် လုပ်ခဲ့သူများလည်း သူ့အောက်တွင် ခိုလှုံခဲ့ဖူးသည်ကို သိရသောအခါ ဝမ်းနည်းမျက်ရည်ကျခဲ့မည်လားမသိ။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ သမိုင်းအဖြစ်သနစ်ပေါင်းစုံကိုသိသော အချစ်သစ်ပုပ်ပင်သည် တက္ကသိုလ်၏ မော်ကွန်းထိန်းကြီးလည်း ဖြစ်သည်။
သစ်ပုပ်ပင်သည် သူ၏အောက်တွင် အချိန်အပိုင်းအခြားအလိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့သော အဓိကရုဏ်းများကို ငုံ့ကြည့်ခဲ့ပေလိမ့်မည်။ အမျိုးသားနေ့ကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည့် ကျောင်းသားသပိတ်မှစ၍ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဆဲဗင်းဂျူလိုင်အရေးအခင်း၊ ဦးသန့်အရေးအခင်း၊ ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံတို့မှ ကြွေးကြော်သံများသည် ညိုမှိုင်းသော သစ်ပုပ်ပင်၏ ပင်စည်အခေါင်းပေါက်အတွင်း ပဲ့တင်ထပ်ခဲ့ကြသည်။
သစ်ပုပ်ပင် ရေဆေးပန်းချီ။ ဓာတ်ပုံ-ဖိုးဝ/မြန်မာတိုင်း(မ်)
မည်သူမျှ သစ်ပုပ်ပင်လောက် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော သမိုင်းကြောင်းများစွာကို မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့ခဲ့မည်မဟုတ်သလို ထိုအကြောင်းတရားများ ‘တရား၏ မတရား၏’ ဆိုသည်ကို သစ်ပုပ်ပင်က သာ၍ သိပေလိမ့်မည်။ သို့သော် သူသည် သက်ရှိဖြစ်သော်လည်း ပြန်ပြောနိုင်စရာအကြောင်းတရား မရှိသဖြင့် မည်သို့သောအကြောင်း ဖြစ်လာပါစေ နှုတ်ဆိတ်၍သာ နေခဲ့သည်။ အကယ်၍ သစ်ပုပ်ပင်သာ စကားပြောတတ်လျှင် သူ့တွင် ပြောစရာစကားများ တောင်လိုပုံပြီး ပင်လယ်ထက်မက များပြားပေလိမ့်မည်။
တံတားဖြူပေါ်တွင် မေးတင်ကာ လဲလျောင်းနေသော အင်းလျား ကန်ပေါင်၊ တောင့်တင်းခိုင်မာ၍ ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်သော ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမ၊ မိုးပေါ်သို့ ထောင်တက်နေသည့် ယုဒသန်မျှော်စင်၊ အနုပညာရှင်ပေါင်းများစွာကို မွေးထုတ်ပေးခဲ့သည့် အပန်းဖြေရိပ်သာ၊ ဦးတည်ချက်ကိုယ်စီဖြင့် ခြေရာချင်းထပ်ခဲ့ကြသည့် အဓိပတိလမ်းစသည့်အရာများသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ချိတ်ဆက်ညီသော အလှတရားများ ဖြစ်နေသည်ဆိုပါလျှင် သစ်ပုပ်ပင်အိုသည် ထိုအလှတရားများအား ပံ့ပိုးပေးနေသည့် အလှတစ်ခု ဟု ဆိုရမည်ဖြစ်သည်။
နွေ၊ မိုး၊ ဆောင်း လည်ပတ်နေသော ရာသီစက်ဝန်းတို့သည် သစ်ပုပ်ပင်အိုကြီးကို တရွေ့ရွေ့တိုက်စားသွားခဲ့ပြီ။ လာမည့်နှစ်ဆိုလျှင် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်ကြီးပင် နှစ်တစ်ရာပြည့်တော့မည်။ ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများ အချိန်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲသွားခဲ့သော်လည်း ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြေသည် မည်သည့်အခါမျှ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသော လွမ်းမောဖွယ်သီးခြားရပ်ဝန်းတစ်ခုအဖြစ် တည်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ထိုလွမ်းမောဖွယ်တက္ကသိုလ်ရပ်ဝန်းအတွင်းမှ လွမ်းမောဖွယ်သစ်ပုပ်ပင်အိုသည် တက္ကသိုလ်၏အမတ (မသေသည်၏အဖြစ်)အနေဖြင့်လည်း အတိတ်တွင် ကျော်ကြားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ယခုလည်း သစ်ပုပ်ပင်သည် မြို့ပြအမွေအနှစ် အထိမ်းအမှတ် အပြာရောင်ကမ္ပည်းပြားကြောင့် ထပ်ပြီးကျော်ကြားရပြန်လေပြီ။
‘နှစ်ပေါင်းတစ်ရာကျော်ရှိသည့် ဤရွက်ကြွေပင်ကြီးသည် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ထက်ပင် သက်တမ်းရင့်ပြီး ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ အဓိက သင်္ကေတတစ်ခု ဖြစ်သည်။’ ဟူသော စာလုံးဖြူမှာ အပြာရောင်နောက်ခံဆိုင်းဘုတ်ကမ္ပည်းပြားပေါ်တွင် ကြွရွနေသည်။ ထိုအပြာရောင်ကမ္ပည်းပြား၏နောက်တွင်တော့ သစ်ပုပ်ပင်အိုသည် ဝင့်ထည်နေလေသည်။
ကှနျဂရကျ ကြူလေးရှငျးပါ… လူပြိုကွီး သဈပုပျပငျ…
လှနျခဲ့သော ၁၁ နှဈ၏ မလေဆနျးပိုငျးတှငျ ‘နာဂဈ’ ဟူသော ဆိုငျကလုနျး မုနျတိုငျးကွီးတဈခု မွနျမာနိုငျငံအနောကျတောငျပိုငျးမှ သိနျးပေါငျးမြားစှာသော ပွညျသူတို့၏ဘဝကိုဖကျြဆီးရနျ ဝငျရောကျခဲ့သညျကို မှတျမိကွဦးမညျ ထငျပါသညျ။
ထို ‘နာဂဈ’ မုနျတိုငျးကွီးက ဧရာဝတီတိုငျးကို ဖွတျကြျောကာ ရနျကုနျသို့ အလုံးအရငျးဝငျခဲ့ပွီး နောကျရကျတှငျ ကြောငျးသူ၊ ကြောငျးသားအပါအဝငျ လူအမြားစု ရနျကုနျတက်ကသိုလျထဲက သဈပငျတဈပငျရှိရာသို့ စိုးရိမျပူပနျသော မကျြလုံးမြားကိုယျစီဖွငျ့ အပွေးအလှား လာရောကျကွညျ့ရှုခဲ့ကွသညျ။ ထိုကဲ့သို့ လူအမြား၏ ခဈြခငျပူပနျမှုခံရသော ထိုသဈပငျသညျ ရနျကုနျတက်ကသိုလျပရိဝုဏျထဲတှငျ တဈပငျတညျးရှိပွီး အဖိုးမဖွတျနိုငျစရာ တနျဖိုးအနဂ်ဂမြားစှာ ရှိနသေညျ့ အပငျ။ ထိုသဈပငျကား သဈပုပျပငျ။
ထိုစဉျက ရနျကုနျမွို့တှငျးရှိ သကျတမျးရငျ့သဈပငျကွီးမြားအားလုံးနီးပါး ‘နာဂဈ’ ဆိုငျကလုနျးမုနျတိုငျး၏ လပွေငျးဒဏျကွောငျ့ အတုံးအရုံးလဲပွိုခဲ့ သျောလညျး သဈပုပျပငျသညျ မွပေျေါတှငျမားမားမတျမတျ ရပျတညျနနေိုငျခဲ့သညျ။ တကယျတော့ ထိုအခြိနျက သဈပုပျပငျကွီး တဈနှဈပတျလုံးခွုံလာခဲ့သညျ့ မွကမ်ဗလာ ဝတျရုံဟောငျးကိုခှာပွီး သဈကိုငျးမြား သဈရှကျမဲ့ (လုံးတီးဖွဈ)နသေော အခြိနျပငျ။
ထို့ကွောငျ့ပငျ လဒေဏျကိုအံတုပွီး မပွိုလဲခွငျးဖွဈသညျဟု အခြို့က ဆိုကွသညျ။ ရနျကုနျမွို့ကွီးကို စောငျ့ရှောကျနသေညျ့ ရနျကုနျဘိုးဘိုးကွီး သဈပုပျပငျတှငျ စိုးစံနသေောကွောငျ့ ဘေးဒဏျမသငျ့ခဲ့ခွငျးဖွဈသညျဟူ၍လညျး ယုံကွညျသူက ယုံကွညျခဲ့ကွသညျ။ အခြို့ကလညျး သဈပငျအောကျခွအေမွဈနှငျ့ ပငျစညျခေါငျးပေါကျကွားထဲ အင်ျဂတသှေနျးလောငျးပွီး ကြားကနျထားသောကွောငျ့ မယိုငျလဲခွငျးဖွဈသညျဟု ထငျမွငျခကျြပေးကွသညျ။
မညျသူက မညျသို့ပငျဆိုဆို သဈပုပျပငျကွီး လဲပွိုမသှားသညျ့အတှကျ ကွောငျ့ စိုးရိမျပူပနျသူအားလုံး စိတျသကျသာရာရခဲ့ကွသညျ။ ‘လောကဓံ မုနျတိုငျးကွားတှငျ ကွံ့ကွံ့ခံရငျဆိုငျခွငျး’ ဟူသော လောကနိယာမ သငျခနျးစာတဈခုကို ရနျကုနျတက်ကသိုလျက ဆရာမြားနညျးတူ သဈပုပျပငျကွီးက လူသားမြားအား သငျပွခဲ့ခွငျးပငျ။
ထိုအဖွဈအပကျြဖွဈပွီး ၁၁ နှဈကြျောအကွာ ပွီးခဲ့သညျ့ စကျတငျဘာ ၆ ရကျ နံနကျခငျးပိုငျးတှငျ သဈပုပျပငျခွရေငျး၌ လူအမြား တဈဖနျ စုဝေးနကွေပွနျသညျ။ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးအစိုးရအဖှဲ့၊ ရနျကုနျမွို့ပွအမှအေနှဈ ထိနျးသိမျးစောငျ့ရှောကျရေးအဖှဲ့နှငျ့ ရနျကုနျတက်ကသိုလျတို့ ပူးပေါငျးပွီး ‘ရနျကုနျမွို့ပွ အမှအေနှဈ’ အထိမျးအမှတျ အပွာရောငျကမ်ပညျးပွားကို သဈပုပျပငျကွီးတှငျ တပျဆငျခွငျးကို လာရောကျဂုဏျပွုနကွေခွငျး ဖွဈသညျ။
ရနျကုနျမွို့ပွ အမှအေနှဈအထိမျးအမှတျ အပွာရောငျကမ်ပညျးပွားကို သကျတမျးရာကြျောရှိ အဆောကျအအုံမြား၊ နရောမြားတှငျ ကပျပေးခဲ့ ပွီးနောကျ သဈပုပျပငျသညျ ပထမဦးဆုံး အပွာရောငျကမ်ပညျးပွား တပျဆငျဂုဏျပွုခွငျးကိုခံရသညျ့ ‘သကျရှိသဈပငျ’ ဖွဈသညျ။ ရနျကုနျတက်ကသိုလျ၏ အထငျကရမြား ဖွဈသော ဘှဲ့နှငျးသဘငျခနျးမ၊ ဂပျြဆငျ၊ အငျးလြားကနျ၊ ကံ့ကျောတောနှငျ့ သကျတမျးရာကြျော အဆောကျအအုံတို့ကိုကြျောပွီး အမှအေနှဈအထိမျးအမှတျကမ်ပညျးပွား တပျဆငျဂုဏျပွုခွငျးခံရသညျကို ကွညျ့ခွငျးအားဖွငျ့ သဈပုပျပငျ၏ ဂုဏျအရှိနျအဝါကို မှနျးဆနိုငျသညျ။
ရနျကုနျတက်ကသိုလျမှ သဈပုပျပငျကွီးသညျ ရုက်ခဗပေညာရှငျမြား၏အဆိုအရ ‘အဖို’ပငျ ဖွဈသညျ။ ထို့ကွောငျ့ သံယောဇဉျရှိသူမြားက သဈပုပျပငျကွီးအား ‘လူပြိုကွီး’ ဟူ၍ ခဈြစနိုးချေါတတျကွသညျ။
အဆိုပါ လူပြိုကွီးသဈပုပျပငျ၏ သကျတမျးကို အတိအကပြွောဆိုခနျ့မှနျးရနျ ခကျခဲသျောလညျး ၁၉၂၀ တှငျ အစပွုခဲ့သညျ့ ရနျကုနျတက်ကသိုလျထကျ သကျတမျးပိုရငျ့သညျဆိုသညျကတော့ မညျသူမြှ မငွငျးနိုငျသော အမှနျတရားတဈခု ဖွဈသညျ။
သဈပုပျပငျကို ရနျကုနျတက်ကသိုလျ၏ဖှားဖကျတျောဟူ၍ တငျစား ပွောဆိုလရှေိ့ကွသညျ။ ရနျကုနျတက်ကသိုလျနယျမွဖွေဈလာမညျ့ လူသူတိုးမပေါကျသညျ့ ‘နာနတျတောကွီး’ ကို ကာလပေါကျဈေး ငှကေပျြရှဈသိနျးဖွငျ့ တညျဆောကျသူတို့ ဝယျယူခဲ့စဉျက ပတေဈရာကြျောမွငျ့သညျ့ သဈပုပျပငျကွီးသညျ ထိုဧက ၄၅၀ ကြျောသဈတောကွီးထဲတှငျ ထီးထီးရှိနှငျ့ပွီးသားဖွဈခဲ့သညျ။ တက်ကသိုလျတညျဆောကျရနျ မွနေရော ခုတျထှငျရှငျးလငျးသညျ့အခါ သဈပုပျပငျကို တှခေဲ့ကွပွီး ကြောငျး၏အဆငျတနျဆာတဈခုအဖွဈ ထညျ့သှငျးသတျမှတျစခေဲ့ကွောငျးကို ၁၉၂၀-၃၀ ပတျဝနျးကငျြ၌ ရနျကုနျတက်ကသိုလျတှငျ ပါမောက်ခအဖွဈ တာဝနျထမျးဆောငျခဲ့သညျ့ D. G. E. Hall က သူ၏စာတမျးတဈခုတှငျ ထညျ့သှငျးရေးသားခဲ့သညျ။
သဈပုပျပငျသညျ သကျတမျးရငျ့ ရှကွျှေကပငျကွီးတဈပငျဖွဈပွီး သူ၏ရုက်ခဗဒေအမညျမှာ Tetramelesnudiflora. R. Br (Datiscaceae) ဖွဈသညျ။ ရှေးဟောငျးဂရိဘာသာစကားအရ Tetra ဆိုသညျမှာ ‘လေးခု’ ဟုအဓိပ်ပာယျရပွီး ‘melos က အစိတျအပိုငျးကို ရညျညှနျးသညျ။ ထို့ကွောငျ့ “Tetrameles” ဆိုသညျမှာ အစိတျအပိုငျးအင်ျဂါလေးခုကို ဆိုလိုသညျ။ ထိုအမညျအတိုငျး သဈပုပျပငျ၏ပှငျ့ဖတျမြားကို ကွညျ့လြှငျ ပှငျ့ရှကျလေးခုနှငျ့ ဖှဲ့စညျးထားသညျကို တှရေ့မညျဖွဈပွီး အဖိုပှငျ့ဖတျမြားက သေးသှယျကာ အမပှငျ့ဖတျမြားက ရှညျမြောမြောပုံစံမြိုး ဖွဈသညျ။
သဈပုပျပငျကို ရနျကုနျမွို့ပွအမှအေနှဈ ကမ်ပညျးပွား တပျဆငျသညျ့အခမျးအနားတှငျ တှရေ့သညျ့ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးဝနျကွီးခြုပျ။ ဓာတျပုံ-ရှငျမိုးမွငျ့/မွနျမာတိုငျး(မျ)
ရနျကုနျတက်ကသိုလျမှ သဈပုတျပွငျကီးမှာ လကျရှိပပေေါငျး ၂၀ဝ ကြျောမွငျ့ပွီး အခေါငျးပှအပငျအမြိုးအစားဖွဈသညျ။ သူ၏ပငျစညျကွီးက ယောကျြားငါးဦးဖကျ မကရှိပွီး လူဝငျနလေို့ရသညျအထိကွီးမားသော အခေါငျးပေါကျမြား ရှိသညျ။ ပငျစညျက အောကျခွမှေအထကျသို့ ရှူးတကျသှားပွီး ပငျစညျလမျးဆုံးရာ ခှဆုံ၌ သဈကိုငျးမြားက မွှလေိမျမွှကေောကျဖွငျ့ အရပျရှဈမကျြနှာသို့ ခှဲထှကျသှားသညျ။ အခြို့သဈကိုငျးမြားမှာ အရှဘေ့ကျသို့ ခှဲထှကျသှားမလိုလိုနှငျ့ လားရာပွောငျး၍ အခွားသဈကိုငျးမြားနှငျ့ ပူးကပျပွီး ဝိုငျးစကျစကျသဈကှငျးမြား ဖွဈသှား ကွသညျ။
သဈပုပျပငျကွီးသညျ မိုးနှငျ့ ဆောငျးတှငျး၌ ဣန်ဒနီမွရောငျ စိမျးမှောငျသညျ့ အသှငျဖွငျ့ သူ့အရိပျအောကျခိုဝငျသူတိုငျးအား အေးမွလနျးဆနျးမှုကို ပေးစှမျးလရှေိ့သညျ။ နှရောသီတှငျတော့ မွစိမျးရောငျသဈရှကျမြားအဖွဈမှ သိင်ျဂီရှရေောငျသို့ တဖွညျးဖွညျးပွောငျးလဲကာ ခွောကျကပျကွှကေုနျကွသညျ။ ထိုကဲ့သို့ တဈပငျလုံး အရှကွျှေကပွီး သဈရှကျမဲ့သှားသောအခါတှငျလညျး လူပြိုကွီး သဈပုပျပငျ က သူ၏ကှကေ့ောကျထိုးထောငျနသေော ရိုးတံရှညျကွီးမြားဖွငျ့ လူတကာကို လှမျးဆှေးအောငျ ပွုစားတတျလသေညျ။ အကယျ၍ သဈပုပျပငျအိုကွီး၏ ရိုးတံကွီးမြားထကျ၌ ဥသွငှကျတဈကောငျ တှနျကြူးနသေညျကို ခံစားမှုနကျရှိုငျးသော ကဗြာဆရာတဈယောကျသာ မွငျလိုကျပါက ထိုမွငျကှငျးသညျ အဆှေးကဗြာတဈပုဒျ အဖွဈသို့ တဈမုဟုတျခငျြး ပွောငျးလဲသှားလရှေိ့သညျ။
သဈပုပျပငျသညျ ရနျကုနျတက်ကသိုလျ၏ အခဈြဇာတျလမျးမြားကိုလညျး သိထားသူဖွဈသညျ။ တက်ကသိုလျတှငျ လာရောကျပညာဆညျးပူးရငျး စုံမကျ သှားကွသညျ့ ခဈြသူစုံတှဲအားလုံးလိုလိုသဈပုပျပငျ၏ရငျခှငျထဲသို့ ခိုဝငျခဲ့ ကွသညျ။ သဈပုပျပငျ၏အမွဈထုံးကွီးမြားပျေါတှငျ အတူယှဉျထိုငျရငျး ခဈြရေးခဈြရာစကားတှေ ပွောခဲ့ကွသညျ။ သဈပုပျပငျကွီးကို သကျသေ ထူပွီး ခိုငျမာသောအခဈြသစ်စာစကားမြား ဆိုခဲ့ကွသညျ။ ထို့အတူ သဈပုပျပငျကွီး အောကျတှငျ ကြောခိုငျးရငျး အသဲမြားလညျး ကှဲကွေ ခဲ့ကွသညျ။
ထိုအခဈြဇာတျလမျးမြားကို လူပြိုကွီးသဈပုပျပငျသညျ တဈစိမျ့စိမျ့ ကွညျ့ရငျး ကွညျနူးခဲ့ဖူးသလို အသဲကှဲပူဆှေးပွီး သူ့အရိပျအောကျသို့ လာရောကျခိုလှုံသူမြားကိုလညျး သူ့အကိုငျးအခကျအရှကျမြားဖွငျ့ အေးမွအောငျ စှမျးဆောငျခဲ့ ပလေိမျ့မညျ။ သို့မဟုတျ မသိခငျြယောငျဆောငျကာ အဝေးသို့ မြှျောငေးနခေဲ့ ပလေိမျ့မညျ။
သဈပုပျပငျအိုသညျ မွောကျမွားစှာသော အခဈြဇာတျလမျးမြားကိုလညျး ဖနျတီးပေးခဲ့သညျ။ သဈပုပျပငျကိုခဈြသော အနုပညာရှငျအသီးသီးက သူတို့၏ရငျထဲတှငျ ဖွဈပျေါလာသော ခံစားခကျြအမြိုးမြိုးကိုလိုကျ၍ ပနျးခြီ၊ ကဗြာ၊ သီခငျြး၊ ဝတ်ထုမြားတှငျ သဈပုပျပငျကို အမြိုးမြိုးပုံဖျောရေးသားခဲ့ကွသညျ။
သဈပုပျပငျ သညျ အခြို့ဇာတျလမျးမြားတှငျ ဇာတျလိုကျ၊ အခြို့သော ဇာတျလမျးမြားတှငျ ဇာတျပို့။
သုမောငျ၏ ‘သဈပုပျပငျစောငျ့နတျ’ တှငျ ကိုဥသွသညျ မကွငျလိုကျရ ရှာသော သူ့ခဈြသူ ‘လဈ’ ကို သဈပုပျပငျခွရေငျး၌ မယျဒလငျတဈလကျ အဖျောပွုပွီး အလှမျးသီခငျြးမြားကို သီကြူးခဲ့သညျ။ မငျးလူ၏ ‘ခဈြမွားရှငျ’မှ စကျပွငျသမားလေး ကိုခဈြအေးသညျ သူခဈြသော တက်ကသိုလျကြောငျးသူ လေး မအေးအေးမူ၏ ပဈပဈခါခါပွောစကားကွားပွီး သဈပုပျပငျအောကျတှငျ လှမျးဆှေးခဲ့သညျ။ သို့ကလို သဈပုပျပငျသညျ ကိုဥသွတို့လို အသဲကှဲသူမြား၏အဖျောပွုရာ ဆှေးဖျောဆှေးဖကျ ရောငျးရငျးကွီးလညျးဖွဈခဲ့သညျ။
လူပြိုကွီး သဈပုပျပငျက မြားစှာသောအခဈြဇာတျလမျးမြားတှငျ အရေးကွီးသောနရောမှ ပါဝငျခဲ့သျောလညျး သူကိုယျ၌က ခဈြသူမရှိသေး။ ထို့ကွောငျ့ပငျ သဈပုပျပငျကိုခဈြသော ကဗြာဆရာမောငျပနျးမှေးက “သဈပုပျပငျကွီး၊ အသကျကွီးပွီ၊ ခုထိရညျးစားမရှိသေး” ဟူ၍ သုံးကွောငျးစပျကဗြာလေးဖွငျ့ ကြီစယျခဲ့ဟနျတူသညျ။ ထိုကဗြာလေးကပငျ တဈပငျတညျး ထီးထီးကနျြရဈခဲ့သောသဈပုပျပငျကွီးအတှကျ အကောငျးဆုံးပွယုဂျ ဖွဈတော့သညျ။
အခဈြသမားမြားခညျြးပငျမဟုတျ၊ နိုငျငံကိုအကြိုးပွုရနျ အစဉျအကွံထုတျနလေရှေိ့သော ကိုအောငျဆနျး၊ ကိုနု၊ ကိုရာဇတျ၊ ကိုသနျ့တို့လို ကြောငျးသား ကောငျးမြားသညျလညျး သဈပုပျပငျအောကျတှငျ ဝငျရောကျခိုလှုံခဲ့ကွသညျ။ တက်ကသိုလျစာကွညျ့တိုကျသို့လာရငျး နံဘေးရှိ သဈပုပျပငျကွီးအောကျတှငျ မိမိတို့လှုပျရှားနသေညျ့ စာပေ၊ နိုငျငံရေးကိစ်စမြားကို ဆှေးနှေးရာ နရောလေးတဈခု ဖွဈခဲ့သညျ။
ထိုသူတို့ကဲ့သို့ ရနျကုနျတက်ကသိုလျတှငျ ပညာရညျနို့သောကျစို့ပွီး တိုငျးပွညျကိုအကြိုးပွုသူမြား ပျေါထှကျလာသောအခါ သဈပုပျပငျသညျ ဝမျးသာကွညျနူး၍ ကနြေပျခဲ့ပလေိမျ့မညျ။ နိုငျငံကိုဆုတျယုတျအောငျ လုပျခဲ့သူမြားလညျး သူ့အောကျတှငျ ခိုလှုံခဲ့ဖူးသညျကို သိရသောအခါ ဝမျးနညျးမကျြရညျကခြဲ့မညျလားမသိ။
ရနျကုနျတက်ကသိုလျ၏ သမိုငျးအဖွဈသနဈပေါငျးစုံကိုသိသော အခဈြသဈပုပျပငျသညျ တက်ကသိုလျ၏ မျောကှနျးထိနျးကွီးလညျး ဖွဈသညျ။
သဈပုပျပငျသညျ သူ၏အောကျတှငျ အခြိနျအပိုငျးအခွားအလိုကျဖွဈပှားခဲ့သော အဓိကရုဏျးမြားကို ငုံ့ကွညျ့ခဲ့ပလေိမျ့မညျ။ အမြိုးသားနကေို့ ဖွဈပျေါစခေဲ့သညျ့ ကြောငျးသားသပိတျမှစ၍ ရနျကုနျတက်ကသိုလျတှငျ ဖွဈပှားခဲ့သော ဆဲဗငျးဂြူလိုငျအရေးအခငျး၊ ဦးသနျ့အရေးအခငျး၊ ရှဈလေးလုံး အရေးတျောပုံတို့မှ ကွှေးကွျောသံမြားသညျ ညိုမှိုငျးသော သဈပုပျပငျ၏ ပငျစညျအခေါငျးပေါကျအတှငျး ပဲ့တငျထပျခဲ့ကွသညျ။
သဈပုပျပငျ ရဆေေးပနျးခြီ။ ဓာတျပုံ-ဖိုးဝ/မွနျမာတိုငျး(မျ)
မညျသူမြှ သဈပုပျပငျလောကျ ရနျကုနျတက်ကသိုလျတှငျ ဖွဈပှားခဲ့သော သမိုငျးကွောငျးမြားစှာကို မကျြဝါးထငျထငျ တှခေဲ့မညျမဟုတျသလို ထိုအကွောငျးတရားမြား ‘တရား၏ မတရား၏’ ဆိုသညျကို သဈပုပျပငျက သာ၍ သိပလေိမျ့မညျ။ သို့သျော သူသညျ သကျရှိဖွဈသျောလညျး ပွနျပွောနိုငျစရာအကွောငျးတရား မရှိသဖွငျ့ မညျသို့သောအကွောငျး ဖွဈလာပါစေ နှုတျဆိတျ၍သာ နခေဲ့သညျ။ အကယျ၍ သဈပုပျပငျသာ စကားပွောတတျလြှငျ သူ့တှငျ ပွောစရာစကားမြား တောငျလိုပုံပွီး ပငျလယျထကျမက မြားပွားပလေိမျ့မညျ။
တံတားဖွူပျေါတှငျ မေးတငျကာ လဲလြောငျးနသေော အငျးလြား ကနျပေါငျ၊ တောငျ့တငျးခိုငျမာ၍ ရငျ့ကကျြတညျငွိမျသော ဘှဲ့နှငျးသဘငျခနျးမ၊ မိုးပျေါသို့ ထောငျတကျနသေညျ့ ယုဒသနျမြှျောစငျ၊ အနုပညာရှငျပေါငျးမြားစှာကို မှေးထုတျပေးခဲ့သညျ့ အပနျးဖွရေိပျသာ၊ ဦးတညျခကျြကိုယျစီဖွငျ့ ခွရောခငျြးထပျခဲ့ကွသညျ့ အဓိပတိလမျးစသညျ့အရာမြားသညျ တဈခုနှငျ့တဈခု ခြိတျဆကျညီသော အလှတရားမြား ဖွဈနသေညျဆိုပါလြှငျ သဈပုပျပငျအိုသညျ ထိုအလှတရားမြားအား ပံ့ပိုးပေးနသေညျ့ အလှတဈခု ဟု ဆိုရမညျဖွဈသညျ။
နှေ၊ မိုး၊ ဆောငျး လညျပတျနသေော ရာသီစကျဝနျးတို့သညျ သဈပုပျပငျအိုကွီးကို တရှရှေ့တေို့ကျစားသှားခဲ့ပွီ။ လာမညျ့နှဈဆိုလြှငျ ရနျကုနျ တက်ကသိုလျကွီးပငျ နှဈတဈရာပွညျ့တော့မညျ။ ရုပျဝတ်ထုပစ်စညျးမြား အခြိနျနှငျ့အမြှ ပွောငျးလဲသှားခဲ့သျောလညျး ရနျကုနျတက်ကသိုလျမွသေညျ မညျသညျ့အခါမြှ ပွောငျးလဲခွငျးမရှိသော လှမျးမောဖှယျသီးခွားရပျဝနျးတဈခုအဖွဈ တညျရှိနဆေဲဖွဈသညျ။
ထိုလှမျးမောဖှယျတက်ကသိုလျရပျဝနျးအတှငျးမှ လှမျးမောဖှယျသဈပုပျပငျအိုသညျ တက်ကသိုလျ၏အမတ (မသသေညျ၏အဖွဈ)အနဖွေငျ့လညျး အတိတျတှငျ ကြျောကွားခဲ့ပွီးဖွဈသညျ။ ယခုလညျး သဈပုပျပငျသညျ မွို့ပွအမှအေနှဈ အထိမျးအမှတျ အပွာရောငျကမ်ပညျးပွားကွောငျ့ ထပျပွီးကြျောကွားရပွနျလပွေီ။
‘နှဈပေါငျးတဈရာကြျောရှိသညျ့ ဤရှကျကွှပေငျကွီးသညျ ရနျကုနျတက်ကသိုလျ ထကျပငျ သကျတမျးရငျ့ပွီး ရနျကုနျတက်ကသိုလျ၏ အဓိက သင်ျကတေတဈခု ဖွဈသညျ။’ ဟူသော စာလုံးဖွူမှာ အပွာရောငျနောကျခံဆိုငျးဘုတျကမ်ပညျးပွားပျေါတှငျ ကွှရှနသေညျ။ ထိုအပွာရောငျကမ်ပညျးပွား၏နောကျတှငျတော့ သဈပုပျပငျအိုသညျ ဝငျ့ထညျနလေသေညျ။